Del.icio.us Plug-in ho an'ny Firefox | Martech Zone
Del.icio.us Plug-in ho an'ny Firefox
Alakamisy, Desambra 14, 2006 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Inona no atao hoe tsoratadidy sosialy? Raha fantatrao ny valiny… mandehana any amin'ny fehintsoratra manaraka. Raha tsy manao izany ianao dia fomba iray tsotra ahafahan'ny mpampiasa mitahiry sy mizara rohy misy tsoratadidy amin'izy samy izy. Del.icio.us dia serivisy mahafinaritra mamela anao hizara sy 'hanome marika' ireo rohy. Ny fametrahana ny rohy dia ahafahanao mahita mora foana ireo rohy tadiavinao amin'ny alàlan'ny interface Del.icio.us.
Tsy mpankafy lehibe an'io aho Del.icio.us tranonkala, fa izaho dia mpankafy ny fanampian'izy ireo. Hahita Widget WordPress ho an'ny Del.icio.us ianao ao amin'ny pejy malalako (avy amin'ny Automattic miaraka amin'ny plugin widgets sidebar). Ary ho hitanao fa tafiditra ao amin'ny fahano aho Feeburner's Link Splicer.
Ny fampiasako ny Del.icio.us ankafiziko indrindra anefa dia ny Firefox Plugin. Jereo eo amin'ny sary etsy ambany, nanisy bokotra “Tag” aho tao amin'ny baraon'ny adiresy. Rehefa tsindrio io bokotra io dia mipoitra endrika mahafinaritra iray azonao atao ny mameno ny fametahana marika sy fitehirizana ny URL ao amin'ny tranombokin'ny Del.icio.us.
Fampisehoana kely mahafinaritra iray mety tsy fantatrao: Raha manasongadina lahatsoratra vitsivitsy amin'ny pejy ianao ary avy eo tsindrio ny "Tag", dia apetaho eo noho eo ilay lahatsoratra nasongadina ao amin'ny saha Notes! Endri-javatra kely mahafinaritra sy mpametra-potoana! Ity misy pikantsary etsy ambany:
Fiadanana ho aminao